बालबालिकासँग बालमैत्री व्यवहार देखाई उपचार गर्छु : डा. बज्राचार्य - Rajmarg Online
बालबालिकासँग बालमैत्री व्यवहार देखाई उपचार गर्छु : डा. बज्राचार्य
डा. प्रयस बज्राचार्य
बुद्ध ईन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, घोराही दाङ
पछिल्लो समय बालबालिकामा के खालका स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने गरेका छन् ?
सामान्यतया वर्तमान समयमा चिसो मौसम भएकाले बालबालिकामा रुघाखोकी, दमको समस्या बढि देखिने गरेको छ । सानो बालबालिकामा र्भाइसका कारण यस्तो खालका समस्याहरु देखिने गर्छन् । यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टको जोखिम बालबालिकामा धेरै हुने संकेत गरेको अवस्था छ ।
हस्पिटलमा तपाईसामु कस्ता खालका विरामीहरु आउने क्रम धेरै रहेको छ ?
विशेष गरेर बुद्ध हस्पिटलमा मसंग आउने विरामीहरु अहिलेसम्म अन्य धेरै साना मेडिकल तथा फार्मेसीहरुबाट औषधी खाएर निको नभएकाहरु आउने गरका छन् । बालरोग सम्बन्धि समस्याहरु अस्पतालमा लिएर आउने विरामीमा यसले दिएको औषधीले छिटो छरितो काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ । बाहिरका धेरै औषधीले काम नगरेका बिरामीहरु बुद्ध हस्पिटलमा उपचार गरेर निको भएका छन् ।
मैले विशेष गरेर जन्मेदेखी १५ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरुको उपचार गर्दै आएको छ । १५ वर्षदेखी माथि उमेर पुगेका नागरिकहरुलाई जुन समस्या देखिन्छन् । तिनी धेरै समस्याहरु पनि बालबालिकमा देखिने गर्छन् ।
विशेष गरेर अहिले मृगी, कलेजो, मृगौला सम्बन्धि रोगहरु, नाक, कान, घाटि, फोक्सो, पेट दुख्ने, जतिपनि संक्रामक रोगहरु सम्बन्धि बालबालिकामा देखिने समस्याहरु आउने गरेका छन् ।
बालबालिकाको उपचार गर्ने शैली र विधिहरु कस्ता हुन्छन् ?
बालबालिकाको उपचार गर्नु भनेको उमेर पुगेका विरामीको तुलनामा केही फरक नै हुन्छ । अन्य विरामीको तुलनामा बालबालिका डाक्टर भन्ने वित्तिकै डराउने संस्कारको विकास घरपरिवारबाटै सुरु भएको हुन्छ ।
घरमा बालबालिकालाई डराउन दिनको लागी अस्पताल लगेर सुई लगाईदिन्छु भनेर डराउन दिने गरेकाले पनि उनिहरुमा अस्पताल र डाक्टर भन्ने वित्तिकै त्रासको वातावरण श्रृजना भएको हुन्छ । त्यसैले गर्दा हामीले उपचार गर्नुभन्दा पहिले बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझ््दै बालमैत्री व्यवहार देखाई उनिहरुको मनोबललाई बढाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसले गर्दा उनिहरुमा भएको समस्या उनिहरुले निर्धक्कताका साथ खुलेर भन्न सक्छन् । त्यसरी रोगको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्छ र उपचार सफल हुन्छ । अर्काेतिर अन्य भन्दा फरक विधिका कुरा गर्नुपर्दा बालबालिकालाई औषधि दिदा समेत धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । ठुलो उमेर समुहकालाई दिएको भन्दा फरक महिना, वर्ष अनुसार ठिक्क मात्रा मिलाएर औषधी दिनुपर्ने हुन्छ ।
कुन उमेर समुहका बालबालिकामा जटिल खालका समस्याहरु धेरै देखिन्छन् ?
मैले चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न थालेको ११ वर्ष भैसक्यो भने विगत ३ वर्षदेखी बालरोग विशेषज्ञ भएर सेवा प्रदान गर्दैै आईरहेको छु । मैले यो अवधिमा सामान्यदेखी लिएर जटिल अवस्थाका धेरै खालका विरामीहरुको सफल उपचार गरेको छु । विशेष गरेर ३० दिनभन्दा कम दिनका बालबालिकामा केही समस्या देखियो भने जटिल रुप लिन सक्ने जोखिम धेरै हुन्छ ।
अर्काेतिर बच्चा जन्मिने भनेर डाक्टरले दिएको समय भन्दा छिटो जन्मिएमा पनि बच्चामा जटिल समस्या आउन सक्ने हुन्छ । यस्ता खालका बच्चाहरुलाई भेन्टिलेटर, एनआईसियुमा राख्नु पर्ने अवस्थाहरु पनि देखिन सक्छन् । अर्काेतिर ५ वर्ष मुनिका बालबालिमा धेरै खालका समस्याहरु देखिने गर्छन् ।
चिसो मौसममा स्वास्थ्यमा देखिने समस्याहरुबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउन सकिन्छ ?
अन्य उमेर समुहका व्यक्तिहरुको तुलनामा चिसो मौसममा बालबालिकाहरुमा स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने जोखिम धेरै हुन्छ । यस्तो बेलामा बालबालिकालाई स्वस्थ्य राख्नका लागी अभिभावकहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बालबालिका काचो माटो जस्तै भएकाले उनिहरु बृद्धि विकास हुने क्रममै हुन्छन् । चिसोमा देखिने समस्याबाट बालबालिकालाई बचाउन के गर्ने भन्ने बारेमा अभिभावकहरुले ज्ञान राख्न जरुरी हुन्छ ।
सकेसम्म अभिभावकहरु समस्या देखिन नदिनका लागी सचेत हुनुपर्छ भने समस्या देखिहालेमा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर स्वास्थ्य जाच गराई बच्चालाई औषधी खुवाउनु पर्दछ । विशेष गरेर यो समयमा बालबालिकालाई न्यानो कपडाहरु लगाई दिनुपर्दछ । चिसोबाट जोगाउदै न्योनो बनाउनु पर्दछ ।
तातो र झोलिलो खानाहरु खुवाउनु पर्दछ । उनिहरुमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले पौष्टिक खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
आगो बालेर कोइलाको तातोमा बालबालिकालाई सेक्नु कत्तिको सुरक्षित हुन्छ ?
आगो बालेर कोइलाको तातोमा बालबालिकालाई सेक्नु एक्दमै जोखिमपुर्ण मानिन्छ । त्यसले बालबालिकालाई सास फोर्न गाह्रो हुने, फोक्सोमा समस्या देखिने समस्या धेरै हुने भएकाले यस्तो जोखिम पुर्ण काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई यस्ता कुराहरुले जटिल समस्या देखिन सक्छ । यसतर्फ अभिभावकहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
यसवर्ष पनि दाङसहित केही ठाउँमा यसरी कोठालाई न्यानो बनाउने भन्दै बालेको आगोका कारण सास फेर्न समस्या भएर मृत्यु भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले यस्तो कुराहरुमा सबै सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ ।
समय र संम्वादका लागी तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
मलाई स्वास्थ्यका बारेमा केही कुराहरु राख्ने अवसर दिनुभयो राजमार्ग अनलाईन युुनिटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।
Prevदेउखुरीको मौरीघाट देवीकोेट हुँदै स्वर्गद्वारी जोड्ने बाटोको सर्भे कार्य सम्पन्न
Nextकोहलपुरमा मोटरसाइकल चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ